कृषि खबर – Page5– rastriyakhabar.com
नेपालको तरकारी यूएई र कतारमा माग
काठमाडौं ।संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई र कतारमा नेपालबाट भ्रम मात्र होइन, तरकारी निर्यात पनि हन थालेको छ । यूएई र कतारमा नेपाली श्रमिकलाई मात्र होइन, नेपाली तरकारीलाई पनि रुचाइन थालिएको छ । नेपालको एक कम्पनीले यहाँ उत्पादित गुन्द्रुकदेखि हरियो तरकारी ती देशसम्म पठाउँदै आएको छ । महँगी र अभावका कारण..
बाह्रै महिना गमलामै फलाउन सकिन्छ धनिया (१० फाइदा सहित)
धनिया स्वाद र स्वास्थ्यका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । धनिया खेतीबारे मानिसहरुलाई धेरै जानकारी हुँदैन । धनिया रोप्नका लागि ठाउँ छैन भन्न सोच्नुभएको छ भने त्यो तपाईको भ्रम मात्र हो । घरको छतमा बाह्रै महिना गमलामै उन्नत जातको धनिया फलाउन सकिन्छ । धनिया चिसो तथा न्यानो दुबै किसिमको हावापानीमा खेती..
प्याज नेपालीहरुले प्रयोग गर्दै आएको तरकारी हो । नेपाली कृषकहरुले प्याज खेतीबाट राम्रो आम्दानी पनि गर्ने गरेका छन् । कतिपय कृषकहरुले प्याज खेतीको तौर तरिका नजान्दा उत्पादन कम हुने, डल्लो सानो लाग्ने, प्याजमा किरा लाग्ने लगायतका समस्याहरु भोग्ने गरेका छन् । आज हामीले प्याज खेतीबारे केही महत्वपूर्ण..
अकबरे खुर्सानी खेती र आम्दानी
खगेन्द्रराज सिटौला / काठमाडौँ । अकबरे खुर्सानीको खेती गर्नलाई धेरै सिंचाइको जरुरत पर्दैन । सुख्खा बारीमा गर्न सकिन्छ । तर बेलाबखत भने पानीले भिजाउनुपर्छ । भन्न खोजेको धेरै सिंचाइको जरुरत पर्दैन । साथै यसले थोरै जग्गाबाट धेरै आम्दानी पनि दिन्छ । साथै धेरै मेहनत पनि चाहिँदैन । अरु खुर्सानीको..
गुल्मी । गुल्मीको रुरु गाउँपालिका–४ बलेटक्सारकी मीना खासुलाई आजकाल घर खर्च चाहिए श्रीमान् गुहार्नु पर्दैन । विद्यालयमा छोराछोरीको खर्चदेखि लिएर विभिन्न सहकारीमा गर्ने कारोवारको समेत उनी आफैँ जोहो गर्छन् । कारण हो, बलेटक्सारकै भण्डारीडाँडामा स्थापना भएको राष्ट्रिय कफी अनुसन्धान केन्द्र । हुन त..
परासी । प्रदेश नं ५ का सहकारीहरुले कम्तीमा ३० प्रतिशत लगानी कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने भएको छ । कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउन र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न प्रदेशले बनाएको सहकारी ऐनमा उक्त व्यवस्था गरिएको प्रदेश नं ५ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले जानकारी दिइन् । पश्चिम नवलपरासीको..
सिंचाई क्षेत्रमा जापानले सहयोग गर्ने
काठमाडौं । जापानले नेपालको सिंचाई क्षेत्रमा सहयोग गर्ने भएको छ । जापानको कृषी, वन तथा मत्स्यपालन मन्त्रालयको प्रतिनिधीमण्डलले उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनसंग भेटवार्ता गर्दै सिचाई क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । भेटमा तराई मधेषमा संचालन भएका सिंचाई आयोजनामा सहयोग..
रायोको सागसँग जो कोही परिचित हुन्छन् । साग नरुचाउने सायदै नहोलान् । साग खाँदा भिटामिन पाइन्छ भन्ने पनि सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । अहिले रायो साग पाइने मौसम हो। जाडो मौसममा सजिलै उपलब्ध हुने, चाँडो पाक्ने र स्वादिलो पनि हुने भएकाले रायोको सागको तरकारी लोकप्रिय मानिन्छ। रायोका साग बढी पोषणयुक्त..
मेथी साग तथा मसलाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । मेथी भान्सामा नियमित प्रयोग हुने मसलारुपी खाद्य पदार्थ पनि हो । आयुर्वेदमा मेथीलाई बहुगुणी औषधीको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । प्राचिन काल देखिनै यस्को औषधीय गुणका कारण तरकारी तथा औषधीको रुपमा प्रयोग गरिंदै आएको छ । मेथीको दाना र साग स्वास्थ्यका लागि निकै..
बहुउपयोगी कुरिलो, स्वास्थ्यका लागि फाइदैफाइदा
कुरिलो तपाईंलाई कति मन पर्छ रु मन पर्दैन भने पनि खाने गर्नुहोस् । यो तपाईंका लागि लाभदायक छ । नेपालका प्रायः सबै भू–भागमा पाइने कुरिलो औषधीय गुण भएको बहुवर्षीय लहरायुक्त वनस्पति हो । यो स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी मानिन्छ । कुरिलोमा काँडासहितको काण्ड र मसिना झुप्पादार पात हुन्छन् । यसका टुसालाई..
असिनापानीका कारण चार करोड बढीको अन्नबालीमा क्षति
म्याग्दी । गत असोज २१ गते बडादशैँका दिन परेको भीषण असिनापानीका कारण म्याग्दीको बेनी नगरपालिका र मङ्गला गाउँपालिकाका गरी तीनओटा वडामा रु चार करोड बढीको क्षति भएको छ । बेनी नगरपालिका–२ ज्यामरुककोटको गौश्वारा, सानालेक, फापरखेत, मङ्गाला गाउँपालिका–१ को थाइबाङ र सोही गाउँपालिकाको वडा नं ३ बरन्जामा..
सुन्तला नाम लिने वित्तिकै तपाईको मुख रसाउछ होला । अहिले सुन्ताला खाने सिजन पनि हो । गाउँघरमा सुन्तला पाक्न शुरु भएको होला । तिहारका लागि भारतबाट पनि सुन्तला आयात शुरु भइसकेको छ । फलफुल बजारमा नेपाल र भारतीय सुन्तला आइसकेको छ । सुन्तला लिएर घाम ताप्दै साथीहरुसँग गफगाफ गर्दै खान निकै रमाइलो हुन्छ ।..
फूल खेतीमा किन आकर्षित भएनन् किसान ?
काठमाडौं । तिहारमा अत्याधिक मात्रामा खपत हुने फूलहरु हुन् सयपत्री, मखमली र गोदावरी । उत्पादन कम र खपत बढि भएसँगै हरेक वर्ष भारतबाट फूल आयत हुने गरेको छ । तिहारमा घरलाई सिगार्नका लागि मानिसहरुले घर आँगन र बगैचाभरि सयपत्री र मखमली रोप्ने गरेका पनि छन् । यतिबेला धेरैका घर आँगन र बगैँचा सयपत्री फूलले..
तपाईले कति ठूलो फर्सी देख्नु भएको छ ? सायद ५ किलो वा १० किलोको हुन सक्ला । औसतमा फर्सिको वजन ५ देखि १० किलोसम्म हुने गर्छ । तर क्यानडाको ब्रुस काउन्टिस्थित पोर्ट एल्गिन गाउँमा ८ सय किलो भन्दा बढी तौलको फर्सी प्रर्दशनीका लागि राखिएको थियो । क्यानडाको पोर्ट एल्गिन गाउँमा हरेक वर्ष फर्सी प्रतियोगिता..
भिन्डी खाँदा स्वास्थ्यमा पुग्छ यस्तो फाइदा
भिन्डीलाई तरकारीका रुपमा सवैले प्रयोग गर्दै आइरहेको हुनुपर्छ । भिन्डीलाई तरकारीका रुपमा विभिन्न परिकार बनाएर खाइन्छ । यो तरकारी मात्र होइन यसले मानव स्वास्थ्यलाई पुर्‍याउने फाइदाबारे सबैलाई जानकारी नहुन सक्छ । आज यहाँ भिन्डीले स्वास्थ्यमा पुर्‍याउने फाइदाबारे केही टिप्स प्रस्तुत गरिएको छ..